News - Ofdị Formwork Maka Concrete Structures 9-8
Ofdị formwork maka ihe owuwu 9-8
A na-eji ihe owuwu ihe eji arụ ihe, maka ihe ndị pụrụ iche iji mepụta ụlọ. A ghaghị ịwụnye ya n'ime ebu pụrụ iche, nke a na-akpọ formwork ma ọ bụ shuttering.
Mpempe akwụkwọ na-ejide ihe a wụsara etinyere n'ụdị ruo mgbe ọ ga-esi ike ma nweta ume zuru ezu iji kwado onwe ya na ịhazi ihe dị arọ. Formwork nwere ike nkewa na ọtụtụ ụzọ:
Site na ihe
Formwork nwere isi ọrụ na ihe na-ewu. Ọ ga-enwerịrị ike iburu ibu niile dị ugbu a n'oge arụmọrụ, ọ ga-ejidekwa udi ya mgbe ihe siri ike.
Kedu ihe ndị a chọrọ maka Ezi Formwork?
Agbanyeghị na enwere ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ, ihe ndị a bụ njirimara arụmọrụ zuru oke iji gboo mkpa nke ihe owuwu:
Ike nke ibu ibu.
debe ọdịdị ya na nkwado zuru oke.
Concrete adịghị emebi mgbe wepụ formwork.
Enwere ike iji ihe ọzọ ma degharịa mgbe ndụ gachara.
Materialdị ihe ọ bụla ekwesịghị imebi ma ọ bụ tụgharịa.
Ofdị ụdị nke ihe omume:
Timdị osisi bụ otu n’ime ụdị mpempe akwụkwọ mbụ eji rụọ ọrụ. Ọ na-agbakọta na saịtị ma ọ bụ ụdị kachasị agbanwe agbanwe, ahaziri nke ọma. Uru ya:
Mfe na-emepụta na-ewepụ
Fechaa, karịsịa ma e jiri ya tụnyere dara formwork
Oru oru, na-ekwe ka ihe ọ bụla udi, size na elu nke ihe owuwu
Ego na obere oru ngo
Na-enye ohere iji osisi obodo
Otú ọ dị, nwekwara adịghị emezi emezi:o nwere obere oge ndụ na-ewe oge na nnukwu oru ngo. Na mkpokọta, a na-atụ aro ịkpụpụta osisi mgbe ego a na-akwụ ụgwọ dị obere, ma ọ bụ mgbe akụkụ ihe ndị dị mgbagwoju anya chọrọ ụdị mgbanwe mgbanwe, a naghị emeghachi ihe owuwu ọtụtụ.
A na-ejikarị osisi plywood eme ihe. Ọ bụ ihe eji emepụta osisi, nke dị na nha na ọkpụrụkpụ dị iche iche. Na formwork ngwa, ọ na-bụ-eji maka sheathing, decking na ụdị linings.
Plywood formwork nwere ihe ndị yiri ya dị ka ụdị osisi, gụnyere ike, ịdịte aka na ịdị fechaa.
Formdị Akwụkwọ: Steelgwè na aluminom
Nrụpụta ígwè na-aghọwanye ewu ewu n'ihi ogologo ndụ ya na ọtụtụ reuses. Ọ bụ ezie na ọ na-efu oke ego, ụdị igwe eji arụ ọrụ bara uru maka ọtụtụ ọrụ, ọ bụkwa nhọrọ bara uru mgbe a na-atụ anya ọtụtụ ohere ịmegharị.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi nke nhazi ígwè:
Ike ma dịgide, yana ogologo ndụ
Emeputa onye na-eji ire ụtọ emecha n’elu ihe
Na-ebelata mmetụta mmanụ a honeyụ na ihe
Mfe arụnyere na kagburu
Adabara curved owuwu
Dị aluminom na-adịkarị ka ọla nchara. Isi ihe dị iche bụ na aluminom nwere obere njupụta karịa nchara, nke na-eme ka mpempe akwụkwọ dị mfe. Aluminom nwekwara ike dị ala karịa ígwè, a ghaghị ịtụle nke a tupu iji ya.
Typedị ụdị a na-agbakọta site na mbadamba na-ejikọta ma ọ bụ sistemụ sistemụ, nke dị fechaa na ike siri ike. Plastic formwork na-arụ ọrụ kacha mma na obere oru ngo esịnede ugboro ugboro ihe aga-eme, dị ka ọnụ ala ụlọ ala.
Dị plastik dị mfe ma nwee ike iji mmiri sachaa ya, ebe ọ dabara maka akụkụ buru ibu na ọtụtụ ugboro ugboro. Ihe ndọghachi azụ ya bụ ịnwe mgbanwe karịa osisi, ebe ọ bụ na e mepụtara ọtụtụ ihe.
Ikesa nhazi usoro nke edobere na ya
Na mgbakwunye na ịbụ nkewa site na ihe onwunwe, enwere ike ịkọwapụta usoro dịka ihe eji akwado ụlọ:
A na-eme ụdị ụdị ụdị niile dịka usoro ha na-akwado, yana atụmatụ mwepụta kwekọrọ na-ezipụta akụrụngwa na ọkpụrụkpụ achọrọ. Ọ dị mkpa iburu n'obi na nhazi usoro na-ewe oge, ọ nwere ike ịnọchite anya 20 na 25% nke mmefu ego. Iji belata ọnụahịa nke formwork, tụlee aro ndị a:
Atụmatụ ụlọ kwesịrị ijizigharị ihe owuwu ụlọ na jiometrị dị ka o kwere mee iji kwe ka usoro eji eme ihe ọzọ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ eji arụ osisi, a ga-egbutu ya iberibe nke buru ibu ka ejiri ya mee ihe ọzọ.
Ihe ndi ozo di iche iche di iche iche. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ mkpebi mkpebi, enweghị nhọrọ dị mma karịa ndị ọzọ maka ngwa niile; ụdị kachasị mma maka ọrụ gị dị iche iche dabere na imepụta ụlọ.
Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Metal Cuplock Scaffolding, Ringlock Scaffolding mgbodo, Akụkụ Ulo olu nke Ringlock,